ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို ကောင်းစွာ ခံစားနိုင်မယ့် စုံတွဲတွေကြားက နွေးထွေးတဲ့ အချိန်လေးတွေ - Lifestyle Myanmar
ဗီယက်နမ်မှ အနုပညာရှင် Luong Thuy ဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲတွေကြားက ဟာသဆန်တဲ့ နေ့စဉ် တုံ့ပြန်မှုလေးတွေကို ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းလေးတွေအဖြစ် ရေးဆွဲတတ်သူ တစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ ပင်တိုင်ရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းတိုတွေဟာ လူတိုင်းနီးပါး ခံစားလို့ရတဲ့ ရုပ်ပြလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရုပ်ပြလေးတွေက သင်ချစ်ရတဲ့သူကို သတိရစေပြီး တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် သင့်ကိုပြုံးစေမှာ သေချာပါတယ်။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ ခံစားႏိုင္မယ့္ စုံတြဲေတြၾကားက ေႏြးေထြးတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြ
ဗီယက္နမ္မွ အႏုပညာရွင္ Luong Thuy ဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စုံတြဲေတြၾကားက ဟာသဆန္တဲ့ ေန႔စဥ္ တုံ႔ျပန္မႈေလးေတြကို ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းေလးေတြအျဖစ္ ေရးဆြဲတတ္သူ တစ္ဦးပါ။ သူမရဲ႕ ပင္တိုင္႐ုပ္ျပ ဇာတ္လမ္းတိုေတြဟာ လူတိုင္းနီးပါး ခံစားလို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ျပေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႐ုပ္ျပေလးေတြက သင္ခ်စ္ရတဲ့သူကို သတိရေစၿပီး သင့္ကိုၿပဳံးေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
မိခင်နှင့် ကလေးတွေရဲ့ နှောင်ကြိုးဟာ အင်မတန်းထူးခြားပါတယ်။ သင့်မိခင်နှင့် သင်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွယ်ကပ်မှုတွေဟာ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ သင်ခံစားရတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ ဒီအရာက သင့်အတွက် ကောင်းတာတွေတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် အကယ်၍မိခင်က သင့်အားညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူတွေ အထူးသဖြင့် သင့်ကို...
''သန်မာသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ မိမိကမ္ဘာကို မိမိကိုယ်ကိုယ်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမက အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက် သူမရဲ့ အသိပညာတွေကို မျှဝေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ - Ellen J. Barrier ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန်ချောမောလှပတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။...
အံ့ဩဖိုကောင်းလောက်အောင် ခံ့ညားသော အမျိုသားတွေမှာ ရှိလေ့ရှိသော ဆွဲဆောင်မှုများ
အမျိုးသားတွေ ခန့်ညားတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများမယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင် ခံ့ညားတောက်ပြောင်ပြီး ကြည်ညိုဖို့တောင် ကောင်းလောက်အောင်အထိ ချောမောကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုချောမောလှပတဲ့အမျိုးသားတွေမှာ အောက်ပါတူညီတဲ့အချက်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ ချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံကြပါသလဲ? ၁။ ဟာသဉာဏ်ရှိခြင်း ကျွန်မတို့အားလုံးက ကျွန်မတို့ကောင်လေးတွေကို ကျွန်မတိုနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး...